Tag: ndị edemede kwa post | Martech Zone
Tag: ndị edemede kwa post
Ngalaba-edepụtara na WordPress
Tọzdee, Eprel 12, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Mgbe onye ọ bụla na-agwa anyị ka anyị mee ihe a bit dị iche iche na anyị blog, anyị mgbe zaghachi na “Enweghị m ike ime na.”. Anyị na-eme ọtụtụ mmepe WordPress ma na-enwekarị mmasị na ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ dị iji nweta ọrụ ahụ. Ternyaahụ, ọ bụ ọkwa ọbịa na-akwalite ihe omume na mgbasa ozi mmekọrịta… ihe mmado ahụ bụ na ọ bụ ngalaba edepụtara blog! Anyị mekwara ya! Ọ bụghị nke ahụ
Sunday, Jenụwarị 20, 2008 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Enwere nwatakịrị ọhụrụ nọ na ngọngọ n'akụkụ akụkụ nke azụmahịa, Mkparịta ụka siri ike. Ebumnuche nke ọrụ ahụ pụtara ìhè - nye nchekwa nchekwa etiti iji soro ihe ndị ọbịa gị kwuru, gbasaa nkọwa karịrị blog gị, ma nye ọgaranya bara ọgaranya iji gosipụta nkwupụta ahụ. Enwere otu ntụpọ na ọrụ ahụ, agbanyeghị, nke na - eme ka ọ ghara ịba n'iji